Mhu Zaw & Ye Htut led Military Cybertroopers or Sit Khwes had repeatedly attacked the Muslims of Myanmar with fake news..ဆိတ်ဖွားတို့ လူထုမောင်ကာဠု တို့ ဆိုတာတွေဟာ ပြန်ဝန်ဟောင်းဗိုလ်ရဲထွတ် နဲ့ အူးဇော်ဌေး တို့ရဲ့ လက်ရာတွေဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ် သူတို့ကတော့ သူတို့ရဲ့ နောက်လိုက် နောက်ပါတွေနဲ့အတူ အိုင်စီစီ ကနေ လွတ်စရာမရှိပါဘူး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Mhu Zaw & Ye Htut led Military Cybertroopers or Sit Khwes had repeatedly attacked the Muslims of Myanmar with fake news..
ဆိတ်ဖွားတို့ လူထုမောင်ကာဠု တို့ ဆိုတာတွေဟာ ပြန်ဝန်ဟောင်းဗိုလ်ရဲထွတ် နဲ့ အူးဇော်ဌေး တို့ရဲ့ လက်ရာတွေဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ် သူတို့ကတော့ သူတို့ရဲ့ နောက်လိုက် နောက်ပါတွေနဲ့အတူ အိုင်စီစီ ကနေ လွတ်စရာမရှိပါဘူး
Because of this letter…Ludu Mg Karlu, Professor Seik Phwar started to defame and wrote LIES against me. The culprits believed to be written byagroup of Military Cyber-troopers led by Hmu Zaw and former Information Minister.
Their thousands of lapdogs led by James MMT (Singapore) Shin Minyar (Johore) shared and liked those propaganda warfare against me.
At last Myanmar gov took action on me by sending SBs and spies to my clinic and their embassy here to investigate.
If Mr Mark Elliot Zuckerberg has the proper record, I might be the first person (may be I am not) about the FB Myanmar Racist Extremist Cybertroopers affiliated to Myanmar Military and USPD. After the Buddhist Monks were FIRE-BOMBED at Lepadaung Copper Mine, because of our group’s offer help to treat them at Australia, I was repeatedly attacked on FB. Mhu Zaw & Ye Htut led Military Cybertroopers or Sit Khwes had repeatedly attacked the Muslims of Myanmar with fake news..
Their thousands of lapdogs led by James MMT (Singapore) Shin Minyar (Johore) shared and liked those propaganda warfare against me. I sent messages to FB CEO (I am sure he has no time to read but his assistants had read). I told him that HE would be responsible IF I WERE killed. My family would sue him with USD 100 million lawsuit. He could not say he don’t understand Myanmar.
IF don’t understand Myanmar STOP Myanmar language FB. IF not appoint teams to control the contents. He should not appoint Military/USDP/NLD Buddhists only but pro-democracy, Ethnic and religious minorities to Myanmar FB. After my complaint message, FB behaviour changed. Once I reported they immediately deleted the FAKE DEFAMATORY POSTS about me. So the Cyber-troopers started to write in other media.
At last I posted WARNING NOTICES on FBs of Mhu Zaw & Ye Htut. Then only all ATTACKS stopped but Myanmar gov took action on me by sending SBs and spies to my clinic and their embassy here to investigate. They refused to renew my PP because of Myanmar Home Ministry’s order. Actually that could be even used as Crimes against Humanity on me. Their PLOTS and PLANS against me becameablessing in disguise as ALLAH swt know everything and is most powerful and rewarded me with the better PASSPORT.
Thane Zaw OO
စစ်လော်ဘီ ရဲမိုး သေဆုံးသွားကြောင်း ကြားသိရလို့ အလွန့်အလွန် ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဖြစ်လေရာ ဘဝတိုင်းမှာ မဘသ၊ စစ်လော်ဘီ အဖြစ် ပြန်လည်ရှင်သန်ပြီး လူ့အပယ်ခံအဖြစ် ထာဝရ ဖြစ်တည်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
၂၀၁၆ မှာ စစ်တပ်ဟာ အာဆာ သူပုန်ထမှုကို အကြောင်းပြပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို ဘယ်သတင်းမီဒီယာကိုမှ လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူခွင့် မပေးခဲ့ဘဲ တံခါးပိတ်ထားခဲ့‌ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်က ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ဖိအား‌ေတွ များပြားလာတာကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာ မီဒီယာတချို့ကို ရွေးချယ်ပြီး အကန့်အသတ်နဲ့ သတင်းရယူခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်အစမှ အဆုံးထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သတင်းယူပြီး နေ့စဉ် သတင်းတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသူဟာ စစ်ထွက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရဲမိုးပါ။ သူနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတော်အဆင့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာ မီဒီယာတချို့က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သမ္မတရံုး ညွှန်ချုပ် ဦးဇော်ဌေးကတော့ ရဲမိုးကို စစ်သတင်းထောက်အဖြစ် ညွှန်းဆိုပြီး တရားဝင် အကာအကွယ် ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူ့ကိုယ်သူ ဘလပ်ပစ် (ဝက်မဲကောင်) အဖြစ် ထေ့ငေါ့ ညွှန်းဆိုလေ့ရှိတဲ့ ရဲမိုးဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြောင်ကြီး သိန်းစိန် သမ္မတအာဏာယူထားစဉ်မှာ ရိုဟင်ဂျာများအပါအဝင် နိုင်ငံသား မွတ်စ်လင်မ်များကို နိုင်ငံအနှံ့ ရန်လိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ တွန်းအားပေးရာမှာ အစပြုခဲ့တဲ့ ရဲဇာနည် ဖေ့စ်ဘွက် စာမျက်နှာကို စတင်အသက်သွင်းခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ (နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲ့ဒီစာမျက်နှာကို ရဲဌာနက လွှဲပြောငါးရယူခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်ထိ ရဲသတငါးတွေ ထုတ်ပြန်ရာမှာ သုံးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။)
ရဲဇာနည်နဲ့အတူ ဘာသာရေး/လူမျိုးရေး အမုန်းမီးများကို တောက်လောင်စေခဲ့သူ အခြားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဲ့ဒီအချိန်က သမ္မတရုံး ညွှန်မှူး ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဇော်ဌေး (မှူးဇော်) ဟာ ရဲမိုးနဲ့ မိတ်ဆွေ‌ရင်းများ ဖြစ်ခဲ့ကြလို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ဖွယ် ရှိပါတယ်။
ဝက်မဲကောင် ရဲမိုးဟာ သူ့ရဲ့ ညစ်ညမ်းတဲ့ သမိုင်းဆိုး လုပ်ရပ်‌ေတွအတွက် အပြစ်ပေး အရေးယူမခံရခင် သေဆုံးသွားတာကြောင့် သူ့လုပ်ရပ်အတွက် နောင်တမရခဲ့မှာ သေချာပါတယ်။
ကောက်ကျစ် ယုတ်မာ ရမ်းကား ရိုင်းစိုင်းခဲ့တဲ့ ဝက်မဲကောင်ကြီးကို သဘာဝတရားကတော့ ဒဏ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ မသထာရေစာ မျက်ရည်အပင်းတွေကို အရင်းတည်ပြီး ရသမျှနဲ့ သောကါစားမူးခဲ့တာကြောင့် အသဲကင်ဆာစွဲပြီး သေချင်းဆိုးခဲ့ပါတယ်။
မင်းအတွက် ထာဝရ ဝမ်းသာပေးနေပါမယ်။
စာကြွင်း – ရဲမိုးဟာ ၂၀၂၁ မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းဖို့ နောက်ကွယ်ကနေ မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးဆိုတာကိုလဲ နောက်ပိုင်းမှာ သိလာရပါတယ်။
ရန်သူ့တပ်မှာ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး အတွက် သေချာဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ အဖွဲ့ရှိတယ်။ မြေပြင်မှာ အသွင်ယူ ထည့်သွင်းပြီး အများက လက်ခံယုံကြည်သူတယောက် ဖြစ်အောင်ထိ ဖန်တီးအသွင်ယူတာလည်း ရှိသလို ယနေ့ခေတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာ မှာ ဆိုလဲ အသွင်ယူ အကောင့်တွေ အင်နဲ့အားနဲ့ ဆောင်ရွက်လာတာ အားလုံး သိပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ အင်အားစုတွေ မှာ သိပါလျက် မေ့လျော့တာ ၊ သတိ လက်လွတ်တာတွေ အများကြီးပါပဲ။
သာဓက အားဖြင့် ပြစရာမလိုအောင် သိပြီးဖြစ်ကြတဲ့ ဘာသာရေး ၊ လူမျိူးရေး သွေးခွဲရန်တိုက် ပြီး ပြဿနာ တက်အောင် လုပ်ခဲ့တာပါ။
ဦးသိန်းစိန် လက်ထက် ၊ ဦးထင်ကျော် ၊ ဦးဝင်းမြင့် စတဲ့ သမ္မတ အစိုးရ လက်ထက် တွေမှာ တဟုန်ထိုး အားကောင်းလာတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာ အထူးသဖြင်​့ facebook မှာ အယောင်ဆောင် အကောင့် ၊ အမည်ခံ အကောင့် တွေ ကို အသုံးပြုလာပြီး စစ်ဆင်ရေး လုပ်လာတာ သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။
သတင်းတုတွေ ဖြန့်ဖို့ ဆောင်ရွက်ကြသလို ပုဂ္ဂိုလ် အကြောင်းပြု ကိစ္စတွေ ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ ထိုအချိန်က NLD ထောက်ခံမှု ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ NLD ထောက်ခံသူ အယောင်ဆောင်ပြီး လွန်လွန်ကဲကဲ တွေ အမြင်ကပ်ပြီး နီပေါတွေလို့ ပျက်ရယ်ပြုခံရအောင် ခပ်ကြောင်ကြောင် အတွေး အရေးတွေ နဲ့ ထိုးဖောက်ပြီး လုပ်တဲ့အခါ ၊ တကယ် NLD ထောက်ခံသူထဲက ရိုးသား ရိုးအသူ အပါအဝင် ဆင်ခြင်တုံ့တရား သတိလွတ်တဲ့ လူအချို့ ပါသွားပြီး ယနေ့ထိ နီပေါ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရအောက် သိမ်းသွင်းခံလိုက်ရသူတွေ အများကြီးပါပဲ။
တဖက်မှာလည်း NLD ဆန့်ကျင်ပြဖို့ အချက်အလက်ပိတ်ထားတဲ့ အကောင့်တွေ ၊ ဓာတ်ပုံဖော်မရဲလို့ နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ အကောင့်တုတွေ ကို အသုံးပြုပြီး ပို့စ်တခုကို ကိုယ်တိုင် ပုံဖျက် တင်တာဖြစ်စေ ၊ အခြားသူ တင်ထားသော လူကြိုက်များနေသည့် ပို့စ်အောက်မှာ ဖြစ်စေ အကန်တွေ၊ ဆန့်ကျင်စာတွေ ၊ အဆဲစာတွေ၊ အားနည်းချက်ကိုင်ပြီး ရိထေ့စာတွေ ကို အင်နဲ့အားနဲ့ ဝိုင်း တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာ NLD တခုကိုသာ မဟုတ်ပဲ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တွေ အပါအဝင် ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစု တရပ်လုံးကို (ဝါ) စစ်အုပ်စု ဆန့်ကျင်သူ အားလုံးကို ပစ်မှတ်ထား ဆောင်ရွက်တာပါ။ ယခုက သဘောပေါက်လွယ်အောင် NLD ကို သာဓက ထုတ်ပြရေးပြတာပါ။
အခုလည်း လာပါပြီ။ သည်တချိန်မှာတော့ မဲနိုင် NLD ပုံဖျက်ရေး အပါအဝင် ၊ အထူး နာမည်ကြီးလာတဲ့ PDF နဲ့ NUG ကိုပါပဲ။ NUG အပေါ် ၊ PDF တွေ အပေါ် ၊ စစ်အုပ်စု ကို ခါးသီးစွာ နည်းအမျိုးမျိုး နဲ့ တော်လှန်နေသူ မှန်သမျှ ကို မြေပြင်မှာ ဖြိုခွဲဖို့ ဆောင်ရွက်သလို ၊ အွန်လိုင်းကနေလည်း စိတ်ဝမ်းကွဲစေဖို့ သူတို့ရဲ့ လုပ်နည်းကိုင်နည်း ဟောင်းတွေကို အင်နဲ့အားနဲ့ အသုံးပြုနေတာပါ။
အထူးသဖြင့် EROs နယ်မြေတွေ မှာ PDF တွေ လေ့ကျင့် ၊ တပ်ဖွဲ့ ပြင်ဆင်နေမှုတွေက စစ်အုပ်စု အတွက် တုန်လှုပ်စရာ နဲ့ အဓိကချေမှုန်းရမယ့် ပြဿနာတရပ် မို့ ၊ မြေပြင်မှာ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေး တွေကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု အပါအဝင် အင်အားသုံး ဆောင်ရွက်နေတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ တဖက်မှာလည်း သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းမှုတွေ ဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာလည်း သိကြပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။
နောက်တမျိုးက လေလှိုင်း တိုက်ခိုက်ရေးပါပဲ။ အရင့်အရင်က ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက် ပုံဖျက် သွေးခွဲခဲ့ကြသလို ၊ ယခု တိုးလာတာက တိုင်းရင်းသားရေး ကိစ္စတွေကိုပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ချင်း(စစ်ကိုင်းထဲမှာလဲပါ) ကယား ကရင် ကချင် တွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာပြီး ပြည်သူထောက်ခံမှု ၊ အားပေး ထောက်ပ့ံမှု ၊ မြင့်တက်လာနေတာကို စစ်အုပ်စုက မနှစ်မြိုပါဘူး။ ထိုတိုက်ပွဲတွေနဲ့ အတူ နာမည်ထွက်လာ လူသိများလာတဲ့ အဖွဲ့တွေ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပါအဝင် ဦးဆောင်သူ ၊ ထောက်ပံ့သူ ၊ လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးဘဏ္ဍာ ရှာနိုင်သူ စတဲ့သူတွေကို ပြည်သူ့ ယုံကြည်မှုကျဆင်းအောင် ၊ စိတ်ပျက်ရွံရှာအောင် ၊ တော်လှန်ရေး ထောက်ခံပြ အကောင့်တုတွေ ၊ တိုင်းရင်းသား အကောင့်တုတွေ ၊ စသည်ဖြင့် ရေးသား ဖန်တီး ဆောင်ရွက်လာတာ သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။
အဖွဲ့အစည်းကို ဖြစ်စေ ၊ ထင်ရှားသူကို ဖြစ်စေ ၊ တော်လှန်ရေး ရံပုံငွေ ရှာနိုင်သူတွေကို ဖြစ်စေ ပစ်မှတ်ထားပြီး ၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူထုနဲ့ ဖြစ်စေ ၊ EROs ဒေသ တိုင်းရင်းသားတွေ နဲ့ ဖြစ်စေ ၊ အလှူခံသူနဲ့ အလှူရှင်တွေ ကြား ဖြစ်စေ ၊ တော်လှန်ရေး အင်အားစု အချင်းချင်း ဖြစ်စေ ၊ ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားအောင် ၊ သံသယစိတ် ဝင်အောင် ၊ ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားအောင် ၊ အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုး အသုံးပြုပြီး စစ်ဆင်ရေးကို ဆောင်ရွက်နေတာ မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ရန်သူ ဟာ အိပ်မငိုက်ပါဘူး ၊ ကဏ္ဍအလိုက် သူတို့ အင်အားကို နေရာချထားပြီး ဗျူဟာမြောက် ဆောင်ရွက်နေတာ အားလုံးသိပြီးသားပါ။
စစ်အာဏာရှင် အမြှစ်ပြတ် ချေမှုန်းရေး တော်လှန်ရေး အင်အားစု များ အနေနဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ လုပ်ရပ် တွေ အပေါ် အကြောင်းသိပြီးအတိုင်း ပါးနပ်စွာ နဲ့ ညီညွှတ်ရေးကို အခြေပြုလျက် တတ်နိုင်သမျှ တည်ဆောက်၍ သတိကြီးစွာဖြင့် ချီတက်ကြပါစို့။